အိမ် | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဤသည် Grace Kelly သည် ၁၉၅၆ ခုနှစ်နွေရာသီကိုအသုံးပြုခဲ့သောကမ်းခြေဖြစ်သည်
2022 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: အိမ်
၁၉၅၆ ခုနှစ်နွေရာသီတွင် High Society ကိုရိုက်ကူးနေစဉ် Grace Kelly သည်သူမ၏ Rhode Island Newport ရှိ Castle Hill Inn ၌သူမ၏မြင်ကွင်းများကြားတွင်အချိန်ဖြုန်းခဲ့သည်။ Volvo Ocean Race တွင် Newport မှတ်တိုင်၌ Castle Hill တွင်ဤကမ္ဘာအဝှမ်း (တစ် ဦး တည်းသောအမျိုးသမီး SCA အဖွဲ့အပါအ ၀ င်) အားလုံး ၀ င်ပြိုင်သည်။ ပိတ်ထားတဲ့နာရီတွေမှာငါတို့ကအံ့သြစရာကောင်းတဲ့လှေတွေကိုလိုက်မကြည့်ဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်လှေခါးတစ်စင်းပါတဲ့ကျောက်တုံးကမ်းခြေတစ်ခုကိုငါသတိထားမိခဲ့တယ်။ အမှန်တော့ ၂၀ ရာစုအလယ်လောက်မှာ Grace Kelly အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့လှေကားတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်၏ site သည်ဒဏ္legendaryာရီမင်းသမီးနှင့်အိမ်ခန်း၏ဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြသည် - Castle Hill ရှိသူမ၏ Harbor House ၌အပန်းဖြေမနေလျှင် Kelly သည်ကျောက်ဆောင်ရှုခင်းကိုရေအနားသို့ခိုးကြည့်သည်။ အဲဒီမှာသူမဟာကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာနေရောင်အောက်မှာ၊ ရေကန်ထဲမှာရေကူးရင်း၊ သူမကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ထိုးသူတွေကသူမကိုမနှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ကမ်းခြေရဲ့အထီးကျန်ခြင်းကိုခံစားနေခဲ့တယ်။ သို့ရာတွင်အပေါ်သို့တက်ခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည်မဟုတ်ပေ။ ၀ န်ထမ်းများမကြာမီသူမအနေဖြင့်သူမ၏ပုန်းခိုရာသို့လွယ်ကူစွာရောက်နိုင်ရန်လှေခါးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် Castle Hill ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဧည့်သည်များအား၎င်းအားသီးသန့်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်
မင်းရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုတွေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမသေချာဘူးလား။ အကောင်းဆုံးလက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာများသည်ကူညီနိုင်သည်။ stackable အံဆွဲများမှခရီးဆောင်အိတ်များအထိသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက် ၁၂ ခုကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။
ရုရှားဘီလျံနာတစ် ဦး ၏မင်္ဂလာဆောင်အတွင်း၌ဓားရှည်၊ ၁၀ ပေကိတ်နှင့်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀၀ ဂါဝန်
ရုရှားရေနံသူဌေးကြီး Ilkhom Shokirova သည်သူ၏သမီး Madina Shokirova ၏မင်္ဂလာဆောင်သို့ရောက်သောအခါကုန်ကျစရိတ်ကိုမနှမြောပါ။ မော်စကိုမြို့ Radisson Royal Congress Park ဟိုတယ်တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးညနေပိုင်းတွင်ဧည့်သည် ၉၀၀၊ ၁၀ ပေကိတ်နှင့်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀၀ ၀ တ်စုံတို့ပါ ၀ င်သည်။
အမျိုးသား Sandwich နေ့နှင့်အခြားနေ့များတွင်စားရန်အံ့သြဖွယ်အရသာရှိသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့် ၃၀
ငါတို့က Glamour မှာနေ့တိုင်းအသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေကိုကြိုက်တယ်၊ (ငါ pb & j ကိုစားနေတယ်)၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အားလပ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ National Sandwich Day ကြောင့်ငါတို့ကသူတို့ကိုနည်းနည်းပိုချစ်တယ်။ ဆင်နွှဲရန်၊ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ချက်နည်းအချို့ကိုသင်ကောက်နှံထားသည်၊ ၎င်းကိုနံနက်စာမှအချိုပွဲမှတဆင့်တိုက်ရိုက်စားနိုင်ပြီးညဥ့်နက်ချိန်၌တပ်မက်မှုများထပ်လာသောအခါ ကြည့်ပါ၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကအစာအိမ်ငြီးသံကိုကြားဖို့လုံလောက်တဲ့အနားမရှိတာသေချာပါစေ။ မနက်စာချဉ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဘေကွန်နှင့်ကြက်ဥအသားညှပ်ပေါင်မုန့် Sandwich Sandwich အစရှိသော Frittata Sandwich နှင့် Olive Salad ကျန်သော Pancake နံနက်စာ Sandwich French Toast Turkey Sandwich Smoked Salmon Smørrebrød Prosciutto, Goese Cheese နှင့် Fig Sandwich LUNCH: Mini Pitas French Dip Sandwich Arugula, Mozzarella, Tomato Focaccia Caprese Mini Sandwiches Pesto Tuna Sandwiches Curried Egg Salad Sandwich Salade Nicoise Sandwich DINNER: Best-Ever Sloppy Joe BOLT (Bacon, Oyster, Lettuce, Tomato) Blue Ribbon Barbecue Chicken Cheeseburgers Barbecue Turkey Sandwich Asian Style Cheeseburgers Chipotced Ice Cream Sandwiches Nutella and Raspberry Sandwiches ချောကလက် Ganache Sandwiches မြေပဲရေခဲမုန့် Sandwiches Frozen Chocolate Sandwiches Gingerbread and Chocolate Sandwiches LATE-NIGHT: Griddled Mortadella and Cheese Cheesy Grilled Pizza Sandwich The PPB (Potato Chip, Pickle, and Bacon) Grilled Cheese
သင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းထားချင်သောလျှို့ဝှက်ကာရစ်ဘီယံကျွန်းစု ၇ ခု
ကာရစ်ဘီယံကျွန်းများသည်ဆောင်းရာသီဧည့်သည်များနှစ်စဉ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ အချို့သောနေရာများသည်သိန်းနှင့်ချီသောခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်ရန်မပျက်ကွက်သော်လည်း၊ လူအစုအဝေး၏စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲအပူပိုင်းမိုးသစ်တောများသို့ခြေလျင်ခရီးများကိုအရာအားလုံးကိုပေးနိုင်သော under-the-radar ဒေသများကျန်ရှိနေသေးသည်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့တူတဲ့ကာရေဘီယံကမ်းခြေကိုသွားလည်ဖို့စိတ်ဝင်စားလား။ ဆက်ဖတ်ပါ။ Antigua နှင့် Barbuda သည်၎င်း၏သန္တာကျောက်တန်းများပြည့်နှက်နေသော်လည်းရောင်စုံကျေးရွာများနှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော်လည်း Antigua နှင့် Barbuda ကျွန်းစုနှစ်ခုသည်ပိုကြီးပြီးပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပြီးကာရစ်ဘီယံနေရာများအတွက်ရှည်လျားသည်။ မကြာခင်မှာပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကတော့ခရီးသွားအသစ်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့သေချာတဲ့ V.C. Bird အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀၊ ၂၄၇.၅၆၉ စတုရန်းပေကျယ် ၀ င်သောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းပြီးစီးလုနီးပြီ။ JFK နှင့်ကျွန်းအကြား JetBlue ၏တိုက်ရိုက် ၀ န်ဆောင်မှုသစ်ကိုနိုဝင်ဘာ ၅ ရက်ကစတင်ခဲ့ပြီး Alitalia ၏ Milan မှ Antigua လမ်းကြောင်းသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ လက်ရာတွေမှာလည်း? မင်းသား Robert De Niro ၏ဒေါ်လာသန်း ၂၅၀ အပန်းဖြေစခန်း ကြည့်ရမည့်အရာ - Stingray City ရှိသူတို့၏သဘာဝနေရင်း၌ငါးကောင်များနှင့်အတူရေကူးခြင်း၊ ကျွန်း၏ရှေးအကျဆုံးအခြေချနေထိုင်ရာ English Harbor ရှိပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောဗြိတိသျှရေတပ်စခန်းကိုယူပါ။ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့သည်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏အချိုမြိန်ဆုံးကျွန်းများကိုတစ်ချိန်ကသူတို့၏လှလှလေးများဟုထင်ခဲ့ကြသည်
လူမှုရေးလိပ်ပြာများအတွက် ၁၁ ပါတီ-ပြီးပြည့်စုံသောဘွဲ့လက်ဆောင်များ
အားလပ်ရက်တွေအတွက်အိမ်ပြန်တဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့အရာ ၁၅ ခု
ကြက်ဥတစ်လုံးဘယ်လိုကျက် (Curtis Stone ကမင်းကိုပြပါစေ)
ကြက်ဥတစ်လုံးကိုကျက်အောင်ချက်တာကမင်းချက်ပြုတ်တာကိုမင်းကျွမ်းကျင်လိုက်တာနဲ့မင်းချက်ပြုတ်တဲ့ဘ ၀ ကိုဝေးဝေးသွားစေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ မနက်စာအဖြစ်ရိုးရှင်းသောနံနက်စာအဖြစ်ကင်ထားသောကြက်ဥကိုသုံးပါ။ (အင်္ဂလိပ်စာ muffin (ထောပတ်သီး၊ parmigiano-reggiano နှင့်ပင်လယ်ဆား) တို့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာ muffin တစ်ပွဲကို တင်၍ အမြန်နေ့လည်စာကိုဖန်တီးပါ။ (spaghetti carbonara ကဲ့သို့) အူး!) သိရန်အခြေခံအဆင့်များ ၁။ ရေကိုဆူအောင်တည်။ ရှာလကာရည်နှစ်ဇွန်းထည့်ပါ (၎င်းသည်ကြက်ဥများကိုသင့်တော်မျှတမှုရှိစေရန်ကူညီပေးသည်) ။ ၂။ ကြက်ဥတစ်လုံးကိုပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲသို့ထည့်။ ကြက်ဥပုံသဏ္maintainန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရေထဲသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောပါ။ ၃။ မိနစ်အနည်းငယ်မျှတည်ထားပါ၊ ပြီးလျှင်ဇွန်းဖြင့်ဖယ်ပါ။ ငါတို့ကကြက်ဥကိုဘယ်လိုအိုက်တင်လုပ်သရုပ်ပြတယ်ဆိုတာငါတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာဘဲ၊ ဒါပေမယ့် Aussie စားဖိုမှူး Curtis Stone ကလုပ်ကြည့်တာကိုပိုကြိုက်တဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ်သဲသဲကွဲကွဲမရှိပဲကြက်ဥတစ်လုံးကိုဘယ်လိုထိုးရမလဲ။
ဆိုဖာသည်သင်၏အိပ်ရာနောက်ကွယ်မှဖြစ်သည်၊ သင်ပိုင်ဆိုင်သောအရေးကြီးဆုံးပရိဘောဂဖြစ်သည်။ အလုပ်ကြာမြင့်ပြီးနောက်သင်၏ခြေဖဝါးကိုမြှင့ ်၍ Netflix မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုတက်ကာသူမမြို့ထဲပျံသန်းသောအခါသင်၏သူငယ်ချင်းကိုလက်ခံပါ။ သို့သော်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏အားသာချက်ကို ယူ၍ နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကောင်းမွန်သောဆိုဖာကိုအမှေးမှိန်မျက်စောင်းတစ်ခုသို့လျှော့ချနိုင်သည်။ သတင်းကောင်းကတော့မင်းအဲဒါကိုအစားထိုးဖို့အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားကိုမချလိုက်ရဘူး၊ ဒီအကြံပေးချက်တွေနဲ့မင်းဘဏ်ကိုမချိုးဘဲနဲ့အဲဒါကို (နီးပါး) အသစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ၁။ ခေါင်းအုံးများကိုပစ်ထည့်ပါ။ မင်းရဲ့ကျောရိုးကူရှင်တွေကပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုတွေ့ခဲ့ရင်၊ ပြီးတော့မင်းကျောဘက်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုပစ်တာကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​သူတို့ကအဲဒါကိုအသစ်အဆန်းလိုဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးတော့မင်းရဲ့အမြင်ကနေကြည့်လို့မကောင်းဘူး၊ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ကူရှင်တွေကိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်။ အနားယူပါ။ ထောင့်တစ်ခုစီ၌နှစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲသင်၏ဆိုဖာအရှည်ကိုလုံအောင်ထည့်ပါ။ 2. သုတ်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းမှန်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကူရှင်များနှင့်အတူဆိုဖာများအတွက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အ ၀ တ် (သို့) အရောင်သုတ်ထားသောအင်္ကျီသည်အသစ်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်လိုအပ်မယ့်ခြေလှမ်းတိုင်းကိုဖြတ်သွားမယ့် Pinterest မှာသင်ခန်းစာများကိုသင်အလွယ်တကူရှာနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းအများစုသည် cheese-aholic အမျိုးအစားထဲသို့ရောက်နေသည်။ ငါဒိန်ခဲအကြောင်းပြောနေတာကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီကအဲဒါကိုအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကအဖွဲ့ချိစ်မှာတရားဝင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူး။ Daily Mail ရဲ့အဆိုအရအသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် Melissa North ဟာဒိန်ခဲကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်။ သူမက“ ပစ္စည်းတွေအနီးကိုသွားရတာကိုမုန်းတယ်၊ လူတွေစားတာကိုမြင်ရတာကြောက်စရာကောင်းတယ်” ဟုသူမကဆိုသည်။ ဆက်စပ်သတင်းများတွင် Toast ဘလော့တွင် Cheese of the Week ကော်လံတစ်ခုစတင်ရန်စဉ်းစားနေသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဂရုပြုပါ။ မဟုတ်ရင်မင်း Melissa North သာမဟုတ်ရင် ဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုကြည့်ပါ။
Foodie တိုင်းလိုက်နာသင့်သော Instagram အကောင့် ၁၀ ခု
အိုး၊ လူတိုင်းလိုပဲ၊ ငါ Instagram မှာအစားအစာညစ်ညမ်းတာကိုငါကြိုက်တယ်။ ငါတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာချိုမြိန်တဲ့အစားအစာတွေ၊ အရသာရှိရှိနဲ့ကြက်ဥရည်တွေစားချင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် carbier သည် ပို၍ ကောင်းသည်။ ဤတွင်စားဖိုမှူးများ၊ နာမည်ကြီးများနှင့်အရသာခံထုတ်လုပ်သူများထံမှကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာများ (၁၀) ခု The New Potato, @thenewpotato The New Potato သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖက်ရှင်နှင့်အစားအစာဘလော့ဂ်များစာရင်းကိုဘာမျှမသိစေခဲ့ပေ။ ညီအစ်မ Danielle နှင့် Laura Kosann တို့သည်အစားအစာမြင်ကွင်းနှင့်အချက်အပြုတ်ဂန္ထဝင်များတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်သောအရာများအတွက်အလွန်မျက်စိကျသည်။ အပိုဆု: သူတို့၏ feed သည်ဘလော့တွင်လာမည့်အရာကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ Bon Appetit, @bonappetitmag ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးများထဲမှအောက်ပါအတိုင်းအလွယ်တကူကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ် Bon Appetit သည်လှပသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ သွားရည်ကျနိုင်သောဟင်းလျာများနှင့်ကြက်ဥများကိုပြီးပြည့်စုံစွာရောစပ်ပေးသည်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ mini how-to vids တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါ။ Dominique Ansel, @dominiqueansel သင် pastry စားဖိုမှူး Dominique Ansel မှသင်ထက် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအချိုပွဲများကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသူသည်အုန်းသီးကိုတီထွင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ (မတ်လရဲ့ဗားရှင်းက lavender ရနံ့သကြားပါ ၀ င်တဲ့နို့နဲ့ပျားရည်ပါ၊ မင်းအံ့သြသွားရင်) Lauren Conrad၊ @laurenconrad OK၊ ငါ Lauren ကိုလိုက်နာဖို့အကောင်းဆုံးဖက်ရှင် Instagram တွေမှာငါသိတယ်။
Spago မှ Wolfgang Puck's Smoked Salmon Pizza Recipe (Caviar, Optional!)
အော်စကာကာလအတွင်းစားဖိုမှူး Wolfgang Puck နှင့်ခပ်စပ်စပ်ဖြစ်သွားပြီးနောက် (သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ feed တွင်ပြပွဲမှနောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းအချို့ကိုအင်စတာဂရမ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်ခဲ့သည်) Puck သည်သူ၏နာမည်ကျော်ဟောလိဝုဒ်စားသောက်ဆိုင် Spago မှချက်ပြုတ်နည်းကိုဝေမျှရန် Puck အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ တကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ငါတို့ပြောခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်သူပြန်လာသောအရာဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ကင်ထားသောဆော်လမွန်ငါးနှင့် caviar တို့နှင့်ကျော်ကြားသောပီဇာ ငါဆိုလိုတာက ... wow ဘယ်သူမှမင်းက caviar သုံးရမယ်လို့မပြောဘူး၊ တကယ်တော့ဒီပီဇာကမပါဘဲနဲ့အရသာရှိလိမ့်မယ်။ Smoke Salmon and Caviar Pizza Dough with Pizza: အထွက်နှုန်း ၄ ၈ လက်မ ၄ လက်မပီဇာ ၁ ထုပ်အခြောက်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောတဆေး ၁ ပျားရည်လက်ဖက်ရည် ၁ ခွက် (ရေ ၁၀၅) ၁၁၅ ဒီဂရီအထိ) ခွက် ၃ ခွက်စာဂျုံမှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း kosher ဆား ၁ ဇွန်း၊ အပျိုစင်သံလွင်ဆီ ၁ ဇွန်းနှင့်နနွင်းနယ်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များ မုန့်စိမ်းချိတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောရောစပ်စက်တွင်ဂျုံမှုန့်နှင့်ဆားတို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ဆီ၊ တဆေး၊ ရောထားသောရေ ၃/၄ ခွက်ကိုထည့်ပြီးပန်းကန်လုံးများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သန့်စင်ပြီးမုန့်စိမ်းများထွက်လာသည်အထိအရှိန်လျှော့ပါ။
မင်းအခန်းကဏ္acceptedကိုလက်ခံပြီးပြီလား၊ MOH ဖိတ်ကြားချက်ကိုရောက်လာတာလားဆိုတာကိုငါတို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကမင်းလက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့ဂုဏ်အမူအယာလေးတွေရှိတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ Menu ကိုအော်ဒါမှာခြင်းဖြင့် Chipotle မှာစျေးပိုသက်သာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Chipotle hack: ကလေး၏ menu မှအော်ဒါမှာခြင်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး ၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်ဝက်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်သည်။
မင်းကို A+ လွမ်းဆွတ်မှုကိုခံစားရစေမယ့်ကျောင်းထောက်ပံ့မှု ၁၀ ​​ခု
၉၀ နှောင်းပိုင်းများနှင့်အစောပိုင်း ၉၀ ၀ န်းကျင်များမှပစ္စည်းများသည်ကျောင်းအတွက်အလွန်အေးသည်။ Trapper Keepers များနှင့် Lisa Frank စတစ်ကာများအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး ၁၀ ချက်ကိုစုစည်းလိုက်သည်။
စစ်မှန်သောမင်္ဂလာဆောင်အယ်လ်ဘမ်: Alexandra နှင့် Jay
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Castle Hill Inn ၌ကျင်းပသောဤအံ့မခန်း Newport, Rhode Island နွေ ဦး မင်္ဂလာသည်ထူးခြားသော New England ဖြစ်သည်။
Alternative Housewarming Party Idea: Waffle Brunch ကိုလက်ခံကျင်းပပါ
Sean နဲ့ငါအိမ်ကိုသိပ်မသွားဖြစ်တော့တာဧပြီလတုန်းကငါတို့အိမ်ကတကယ်ထိုက်တန်တဲ့ homewarming party ကိုလက်ခံကျင်းပဖို့အချိန်မရခဲ့ဘူး။ ငါတို့ကပြင်ဆင်ပြီးအဲဒါက 'အေးချမ်းသာယာမှု' မှာရှိတယ်ဆိုတာသေချာတဲ့အခါငါတို့ကပြီးပြည့်စုံတဲ့ပွဲတစ်ခုကိုစီစဉ်ပြီးဖိတ်စာတွေပို့ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 'Wafflowe' homewarming party သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနေမှုပုံစံအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဆောင်ပုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်စရာအိမ်ကိုနွေးထွေးမှုကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ ကြောက်စရာကောင်းသောဧည့်သည်များနှင့်အတူကြယ်ပွင့်ဖြစ်ရန်အစားအစာကိုစီစဉ်ပါ၊ သင်လိုချင်သောအတွေ့အကြုံသည်မလွဲမသွေလိုက်နာလိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာ waffle party ကြီးကိုဘယ်လိုပစ်ရလဲဆိုတဲ့ငါ့ရဲ့အကြံပေးချက်တွေက ၁။ ဘူတာတွေကိုဖွင့်ပါ။ စားပွဲတင်ရန်နေရာ (မီးဖိုချောင်)၊ အချိုရည်များ (လူတိုင်းအပန်းဖြေမည့်နေရာအနီး) နှင့် topping ဘူဖေး (လူတိုင်းအပန်းဖြေထွက်နိုင်သည့်နေရာ) ဖြစ်သင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အလွန်ကျဉ်းကျပ်မည်မဟုတ်သလိုသင်၏ဧည့်သည်များသည်ကွဲပြားသောလူအုပ်နှင့်ရောနှောနိုင်သည်။ ၂။ ကူညီသူများကိုစုဆောင်းပါ။ လတ်ဆတ်သောမွှေထားသောကြက်ဥများ၊ ဘေကွန်နှင့် waffles များအတွက် ၀ ယ်လိုအားသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါတီတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကြက်ဥနှင့်ဘေကွန်ကိုလူလုပ်ရန်နှင့် waffles ပြုလုပ်ရန်ကွဲပြားသောတစ်စုံတစ်ယောက်အားသတ်မှတ်ပါ။ သင်၏ဧည့်သည်များသည်လည်းဧည့်သည်ကိုအလိုရှိသည်၊ ၎င်းသည်လုံး ၀ နွေးထွေးသောပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သေချာပါစေ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံး Airbnbs တွင်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအချက် ၇ ချက်
Pinterest သည်ဒီဇိုင်းလှုံ့ဆော်မှု၏ယုန်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဤအလွန်ကောင်းမွန်သော (နှင့်လူကြိုက်အများဆုံး pinned! တစ်ခုချင်းစီသည်သင့်အားအိမ်ခြံမြေမနာလိုမှုများနှင့်အတူမျက်ရည်ကျစေမည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ဤအရာသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်း Airbnbs မှမယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးခုနစ်ခုဖြစ်သည်။
iPhone Hack: နောက်ဘက်ရှိ Apple Logo သည်ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်
TikTok အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကစခရင်ရှော့ရိုက်ရန်၊ အသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းရန် (သို့) ဖန်သားပြင်သော့ခတ်ရန် iPhone ၏နောက်ဘက်တွင် Apple logo ကိုပရိုဂရမ်ထည့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်း Dark Lipstick ကိုရနိုင်တယ်။ ဒီနာမည်ကြီးတွေကမင်းကိုဘယ်လိုပြလဲ
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Golden Globes မတိုင်မီသင်တွေ့မြင်ရမည့်အရာ
နိုင်ငံ၏ပွဲ ဦး ထွက်ပြပွဲတွင်အကောင်းဆုံး ၀ တ်စားဆင်ယင်မှု - ယခုမဲပေးပါ။
micro needling သည်အဖိုးထိုက်တန်သည်
အမျိုးသမီး ၅၀ သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း